I-Inukshuk Suite - Amagumbi eRaleigh - I-Airbnb
I-Inukshuk Suite - Amagumbi eRaleigh
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguKimberly
IRaleigh Rooms kunye neTaylor's Crafts zisetelwe ukuvula iingcango zeyona ndawo intsha ivenkile yezandla kunye neendawo zokuhlala kwiGreat Northern Peninsula yexesha labakhenkethi lika-2018. I-Inukshuk Suite ifumaneka ibekwe ecaleni kwezibuko kwindawo yokuloba enqabileyo yaseRaleigh. Jonga indawo ukuze ubone ii-icebergs, iminenga, kunye nezinye izilwanyana zasendle, kwaye ujonge iindawo zokuhlala zeViking. Yonwabela ikofu yakho kwiveranda yethu egqunyiweyo ejonge iBurnt Cape Ecological Reserve.
I-Inukshuk Suite iya kubonelela iindwendwe ngokuhlala ubusuku obutofotofo kunye nebhedi yobukhulu bokumkanikazi egxininiswe ngeeqhiya zasekhaya zasekhaya zaseNewfoundland. Umandlalo kunye neetawuli zomiswa umgca xa imozulu isebenzisana. Le suite ephangaleleyo iya kunikwa ibhedi yesofa. Amaxabiso asekelwe kwindawo yokuhlala abantu ababini (I-$ 10.00 eyongezelelweyo ngomntu ngamnye). Igumbi lakho liya kuba neTV yeSatellite, iWIFI, ifriji yebar encinci, kunye neTassimo coffee maker.
IRaleigh Rooms kunye neTaylor's Crafts zisetelwe ukuvula iingcango zeyona ndawo intsha ivenkile yezandla kunye neendawo zokuhlala kwiGreat Northern Peninsula yexesha labakhenkethi lika-2018. I-Inukshuk Suite ifumaneka ibekwe ecaleni kwezibuko kwindawo yokuloba enqabileyo yaseRaleigh. Jonga indawo ukuze ubone ii-icebergs, iminenga, kunye nezinye izilwanyana zasendle, kwaye ujonge iindawo zokuhlala zeViking. Yonwabela…
4.67 (iingxelo zokuhlola 13)
IRaleigh luluntu oluzolileyo olubekwe ecaleni kwePistolet Bay entle. Jonga iRaleigh Historical Fishing Village ekumgama omfutshane ojikeleze izibuko. Ngaphesheya kwezibuko ukusuka kumagumbi eRaleigh ungajonga iBunt Cape Ecological Reserve eyaziwa ngeLimestone Barrens, iRare Arctic Plants, iFrost Polygons, iCannon Holes kunye neMigidi yoLwandle. Thatha uhambo lokuhamba ngeenyawo kwiNuddick Trail ekumgama omfutshane kwi-Ship Cove Road.
Kim At Raleigh Rooms